Ahoana ny fametrahana ny taratasy fanamarinana nomerika amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ny fanamarinana nomerika dia rafitra iray ahafahantsika mamantatra ny tenantsika amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana ary singa maro hafa toy ny oniversite. Tsikelikely, ny fanaovana fampiasana feno andraikitra sy ny habetsaky ny mari-pahaizana nomerika dia midika fa tolotra sy fiasa bebe kokoa no atolotra amin'ny alàlan'ny Internet, izay misoroka antsika amin'ny famindram-pahefana tsy mendrika amin'ny rafi-panjakana miasa.
Na izany aza, ny iOS sy ny macOS dia rafitra tsy mailo amin'ity karazana fampifangaroana sy rafitra fanamarinana ity. Hasehonay aminao ny fomba ahafahanao mametraka ny mari-pahaizana nomerika amin'ny iOS amin'ny fomba mora mahagaga hahafantarana ny tenanao amin'ireo fitantanan-draharaham-panjakana -tserasera.
Voalohany indrindra, dia tokony homarihina fa zava-dehibe ny nangatahantsika sy nakarintsika taloha ny fanamarinana nomerika antsika, nanomboka Tsy afaka mangataka sy mametraka azy mivantana avy amin'ny Safari ho an'ny iOS na macOS izahay satria tsy manohana ny rafitra fanamarinana ireo mpizaha. Na izany aza, raha vao efa nampiasa Mozilla Firefox na Internet Explorer ho an'ity isika dia mila manondrana fotsiny ilay taratasy fanamarinana miaraka amin'ny fitehirizana fototra, afaka manaraka ireo fampianarana FNMT ao amin'ny ITY FIAINANA ityRaha vantany vao azontsika ny rakitra misy ny mari-pahaizana dia afaka miroso amin'ny fametrahana amin'ny fitaovana iOS isika.
Ho an'ity dia haka ny rakitra ao amin'ny PC izahay ary izahay hotehirizinay ao anaty lahatahiry mahaliana antsika ao amin'ny iCloud Drive izany (na rindranasa mifandraika amin'ny "Files" an'ny iOS). Handeha any amin'ny fampiharana izahay izao "Records" ny iPhone ary hanaraka ny làlana izahay mandra-pahitanay ny taratasy fanamarinana. Tsindrio io dia hisokatra ny rafitra fametrahana mari-pankasitrahana, mila tsindrio fotsiny isika «mametraka " eo amin'ny zoro havanana ambony ary ampidiro ny teny miafina. Raha vantany vao ampidirina ao amin'ny mombamomba anay izany, dia afaka mamantatra ny tenantsika miaraka amin'ny taratasy fanamarinana amin'ny tranonkala na fitantanan-draharaham-panjakana haingana sy haingana isika. Mba hanaovana izany, rehefa miditra dia hampiseho amintsika ilay taratasy fanamarinana voafantina ary tsindrio ny hanaiky toy ny amin'ny sary lohateny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ahoana ny fametrahana ny taratasy fanamarinana nomerika amin'ny iPhone
Vao avy nanavao ny DNIe ho 3.0 tiako ho fantatra ny fampiasana azy amin'ny iPhone, tsy fantatro izay app hampiasana ahy. Tiako raha fantatrao ny fomba ampahafantaroanao ahy.
Fiarahabana sy fisaorana mialoha
Afaka atao sonia amin'ny alàlan'ny fanamarinana nomerika avy amin'ny iPad ve ny pdf? Nandramako tontolo andro aho ary tsy misy fomba hanaovana izany, na nahita valiny tsara. Mirary ny soa indrindra.
Serge dia hoy izy:
Ary inona ny teny miafina, aiza no ahitako azy?
Valiny tamin'i Serge
Ahoana ny fanesorana mora ny carte de crédit amin'ny iPhone-nao
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny HomePod an'ny Apple